के हो दाँतको कस्मेटिक उपचार, कसरी गर्ने? (भिडिओ) :: डाक्टर आकृति कोइराला :: Setopati
डाक्टर आकृति कोइराला
दन्त रोग विशेषज्ञ
हाँसो सबैको लागि अपरिहार्य छ। यसलाई अझै राम्रो बनाउन कस्मेटिक उपचार गरिन्छ।
कस्मेटिक उपचारले सौन्दर्य बढाउनुका साथै दाँतलाई स्वस्थ्य र बलियो बनाउँछ।
दाँतको बिचमा ग्याप छ भने त्यो ठाउँमा खाने कुरा अड्किने, गिजा सुन्निने र किराले खाने समस्या हुनसक्छ। यस्तो ग्याप भर्ने हो भने खाने कुरा अड्किने समस्या समाधान हुनुका साथै सुन्दर देखिन्छ।
कसै कसैको दाँत पहेँलो हुन्छ। यस्तो समस्या कसै कसैको जन्मजात हुन्छ भने कुनै मान्छेको खानपिनले गर्दा हुन्छ। चुरोट, सूर्ति, खैनी सेवन गर्ने व्यक्तिको दाँत पहेँलो हुन्छ। दाँत पहेँलो हुँदा एकातिर नराम्रो देखिन्छ भने अर्कोतिर यसले समस्या पार्दै जानसक्छ। यस्तो अवस्थामा पनि कस्मेटिक उपचार गर्न सकिन्छ।
भाँचिएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार गरेर राम्रो बनाउन सकिन्छ। कस्मेटिक उपचार भनेकै छोटो समयमा दाँतलाई कसरी राम्रो देखाउने र स्वस्थ्य बनाउने भन्ने हो।
उपचार गरेपछि यसको हेरचाह पनि उत्तिकै जरूरी छ। त्यसकै आधारमा यो कति समयसम्म टिक्छ भन्ने हुन्छ।
यसको कुनै साइड इफेक्ट छैन। किनकि, यसले दाँतलाई राम्रो मात्रै देखाउने भन्ने होइन, दाँतको कामका लागिसमेत सहयोग गर्छ। प्राकृतिक दाँत जस्तै देखाउने यसको प्रयास हुन्छ।
हरेक ६ महिनामा दाँतको परीक्षण गर्नुपर्छ। सामान्य अवस्थामा समेत ६ महिनामा परीक्षण गरेको राम्रो हो। कस्मेटिक उपचार गरेकाले पनि नियमित परीक्षण गर्नुपर्छ।
दाँतमा फोहोर जमेको हुन्छ। यदि त्यसलाई सफा गर्न सकिएन भने त्यो ढिक्का भएर जम्छ र गिजा सुनिन्छ। त्यसैले बेला बेलामा दाँत सफा गर्न जरूरी हुन्छ। दाँत र गिजा बिचको फोहोर झिक्दा केही समय दाँत हल्लिए जस्तो हुन्छ। त्यसकै आधारमा दाँत हल्लियो भन्नु गलत बुझाई हो। विस्तारै यो ठीक हुँदै जान्छ।
दाँतको कस्मेटिक उपचार किन जरूरी छ, दाँत सफा गर्दा कमजोर हुन्छ कि, हुँदैन लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले अल्का डेन्टल होम (अल्का अस्पताल) मा कार्यरत दन्त रोग विशेषज्ञ डाक्टर आकृति कोइरालासँग भिडिओ कुराकानी गरेका छौं। हेर्नुहोस्...
बांगोटिंगो दाँतलाई कसरी मिलाउने? (भिडिओ)
दाँतको दुखाइबाट कसरी जोगिने? (भिडिओ)
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ १५, २०७८, ०३:५०:००
‘बच्चा भुलाउने नाममा बालबालिकालाई मोबाइल/टिभी नदेखाऔं’